आज मध्यरातदेखि देशभर लागु हुँदैछ यस्तो नयाँ नियम, के गर्न पाइन्छ-पाइदैन ? सबैले थाहा पाउनेपर्ने — Imandarmedia.com
आज मध्यरातदेखि देशभर लागु हुँदैछ यस्तो नयाँ नियम, के गर्न पाइन्छ-पाइदैन ? सबैले थाहा पाउनेपर्ने
काठमाडौ। निर्वाचन आयोगले आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि शुक्रबार मध्यरातदेखि आचारसंहिता लागू गर्ने तयारी गरेको छ । राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवालालाई पालना गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गराएपछि आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो।